टाढिएर जमेको मिलन | Nagarik News - Nepal Republic Media
टाढिएर जमेको मिलन
१३ श्रावण २०७७ १० मिनेट पाठ
हिप्पी शैलीको पोशाकमा ठाँटिएर सोह्रखुट्टेको बाटो दाता मोल्दै लेखनाथ मार्ग ठमेलमा अवस्थित सरस्वती कलेज पुग्थे कुनै बेला नेपालका चर्चित हास्यकलाकार सन्तोष पन्त । हिप्पीमय भएको काठमाडौंको नयाँबजारका फाँटमा रमाउँदै हुर्किएका सन्तोष पन्तलाई हिप्पी फेसनले नछुने सवाल नै थिएन । उनी रफ हिप्पी पोशाकको खुबै शौखिन थिए । तर हिप्पी व्यवहारले भने उनलाई छुन सकेको थिएन ।
नमिलाइएको कपाल, लथालिंग पोशाक अनि हेर्दैमा रफ स्वभावका सन्तोषसँग कलेजका साथीभाइहरु निकै झुम्मिन्थे । तर त्यही कलेजमा कुनै केटी साथी यस्ती पनि थिइन् जो सन्तोष पन्तसँग कहिल्यै झुम्मिइनन् । ०३४/३५ सालतिर बिए अध्ययन गर्ने क्रममा पहिलोपल्ट सन्तोष पन्तले उनलाई देखेका थिए जसको नाम थियो— प्रतिभा शर्मा ।
काठमाडौंको बालाजुमा जन्मिएकी प्रतिभाका बुवा शिक्षक थिए । शिक्षित घराना भएका कारण पनि प्रतिभालाई अध्ययनका लागि कुनै समस्या थिएन । केटीहरुले पढ्ने स्कुलमा पढेकी प्रतिभालाई राम्रोसँग पढ्नुबाहेक अरु सपना नै थिएन । यता सन्तोष पन्त भने तिनै लजालु स्वभावकी प्रतिभासँग धेरै सपना देख्न थालिसकेका थिए ।
पन्त २० वर्षकै उमेरमा कलाकार भइसकेका थिए । गाईजात्रा गर्ने, रेडियोमा रसरंग कार्यक्रम चलाउने सन्तोषको आवाजका दिवानाहरुको संख्या बढ्ने क्रममा थियो । तर सन्तोषको दिमागमा पहिलोपटक आफूलाई मन परेको मान्छे रहिरह्यो ।
लामो समयपछि प्रतिभा सहजतापूर्वक सन्तोषसँग बोल्न थालेकी थिइन् । घरसम्म सन्तोष गफ गर्दै जाँदा पनि नरिसाउने भएकी थिइन् । यसरी केही समय बिताएपछि सन्तोष फेरि साथीभाइ जम्मा पारेर ट्रेकिङ हिँडे । त्यसपछि सन्तोषको अभाव प्रतिभालाई खड्किएको महसुस भयो ।
त्यसअघि प्रेमिका नै नभएका पन्त सुरुमा प्रतिभाको घमण्डी स्वभावलाई नै मन पराए । साथीभाइहरुको घेरामा सधैँ हाँसीमजाक गरिरहने सन्तोष पन्तलाई प्रतिभाले खासै महत्व नदिएपछि उनको मनमा अनौठो भाव आयो । मजस्तो मान्छेलाई भाउ नदिने यो बाउनी को रैछ ? यसलाई अब पासोमा नपारी भएन, सन्तोषले उनलाई आफ्नो बनाउने अठोट गरे । म हत्तपत्त हार्ने मानिस होइन, सन्तोष त्यति बेलाको घटना सम्झन्छन् ।
साथीभाइले जिस्काउन थालेको केही समयपछि सन्तोषले एक दिन हिम्मत गरेर प्रतिभालाई बोलाए ।
ओइ, बाहुनी । प्रतिभा सन्तोषको अघि उभिइन् अनि सन्तोषले मनको कुण्ठा पोख्न भ्याइ हाले ।
तिम्रो ब्वाइफ्रेन्ड छ ?
प्रतिभाको छैन भन्ने उत्तर आएपछि मुसुक्क हाँस्दै सन्तोषले फिल्मी शैलीमा डाइलग दिए ।
त्यसो भए म तिमीलाई माया गर्छु, आजदेखि म तिम्रो ब्याइफ्रेन्ड भएँ । सन्तोषको कुरा सुनेर रातोपिरो बनेकी लजालु स्वभावकी प्रतिभा अचम्ममा परिन् । केटीहरु मात्र पढ्ने स्कुलमा पढेकी उनलाई सरस्वती कलेज आउनु नै गल्ती गरेँ कि भन्ने पनि लाग्यो । एक मन कलेज पढ्न पाउनु नै उनका लागि सबैभन्दा ठूलो खुसीको कुरा थियो । रिसले चुर भएकी प्रतिभालाई सन्तोषले अलि सहज बनाइदिन खोजे ।
आजै भन्नु पर्दैन, १५ दिनपछि भने नि हुन्छ भने सन्तोषले ।
त्यसपछि सन्तोष र प्रतिभाको दूरी झन् बढ्न थाल्यो । प्रतिभा सकभर सन्तोषबाट टाढै रहन खोज्थिन् भने सन्तोष सकभर प्रतिभाकै नजिकनजिक रहन खोज्थे । उनीहरुको लुकामारी करिब एक वर्ष नै चल्यो । प्रतिभा सन्तोषको आँखा छलेर घर जाने बाटो खोज्थिन् भने सन्तोष कलेजको कौशीमा बसेर कताबाट निस्किन्छिन् भनेर हेरिरहन्थे । जुन बाटो प्रतिभा निस्कन्थिन् त्यै बाटोमा फिल्मी शैलीमा हात फैलाउन सन्तोष पुगी हाल्थे । मिथुन चक्रवर्तीको कुन फिल्म थियो त्यो, नाम बिर्सेँ, त्यो फिल्म हेर्दा सन्तोषले मेरो स्टाइल मिथुनले चोरेछ भन्नुहुन्थ्यो । हिजोका त्यस्ता दिनलाई सन्तोष पत्नी प्रतिभा हाँस्दै सम्झिन्छिन् ।
जति इग्नोर गरे पनि पिछा गर्न नछाडेपछि प्रतिभा दिक्क भएकी थिइन् । पढेर ठूलो मान्छे बन्ने सपना भएकी प्रतिभालाई सन्तोषकै कारण पढाइ छोडाँै कि भन्नेसम्म पनि एकाध मनमा नआएको होइन । त्यति बेलाको जमाना आजजस्तो कहाँ थियो र ? केटाकेटी सँगै हिँड्दा बात लाउँथे मान्छेले, हात धोएरै पछि पर्नु भाथ्यो मेरो । त्यतिबेलाको समयलाई हँसिलो पारामा सुनाउँछिन् प्रतिभा ।
सन्तोषले जति पिछा गरे पनि आफ्नो पासोमा प्रतिभा नआएपछि कक्षामा शिक्षकले पढाइरहँदासमेत ध्यान दिएर बस्न सक्दैनथे । उनी शिक्षकलाई प्रश्न सोध्न उठ्थे तर त्यो प्रश्न किताबभित्रको नभई सन्तोषको मन भित्र हुन्थ्यो ।
सर, लभ गर्नु अपराध हो ?
शिक्षक विनाप्रसङ्ग आएको प्रश्नमा अलमल पर्दै होइन भन्ने उत्तर दिन्थे । अनि त के चहियो र सन्तोष प्रतिभालाई हेर्दै सुन्यौ भन्थे
अनि सर त्यसो भए किन वास्ता गर्दैन त ?
फेरि शिक्षकलाई प्रतिप्रश्न गर्थे सन्तोष । कक्षा हाँसोले गुन्जिन्थ्यो । प्रतिभा डरले काप्न थाल्थिन् ।
यसरी सन्तोष र प्रतिभाको दूरी नजिकिनुको साटो झन् टाढिँदैै जान थाल्यो । मेरो त कुनै त्यस्तो सोचाइ नै थिएन, कलेज पढ्न पाएकोमै खुसी थियो मेरा लागि । सन्तोष पत्नी प्रतिभा त्यतिबेलाको अवस्था सम्झिन्छिन् ।
उहाँले अत्ति नै गर्नु हुन्थ्यो, जहाँ पनि पछि लागेर आइपुग्ने, बोल्न मन छैन आफूलाई तर जबर्जस्ती बोल्नै पार्ने बनाउने, धेरै पीडा दिनु भयो । श्रीमतीको कुरा सुनेर मख्ख पर्दै हाँसिरहेका पन्त ठट्यौली पारामा उल्टै श्रीमतीलाई प्रश्न गर्छन् तिम्ले ओके भन्या भए म पिछा गर्थेँ र ? पन्त दम्पतीको धापासीस्थित पल्लाबी कुटी हाँसोले गुन्जायमान भयो ।
लगातार गाईजात्रामा प्रथम हुँदै आइरहेका हास्य कलाकार सन्तोष चलचित्रमा पनि खुबै शौखिन थिए । एक दिन संयोग अचम्मको बनाएछन् सन्तोषले । प्रतिभा शर्मा आफ्नी दिदीसँग फिल्म हेर्न जय नेपाल हल जाने सोचमा थिइन् । चलाख सन्तोषले कसो कसो मेसो पाई हालेछन् । त्यसपछि त सन्तोष संयोगको नक्कल गर्दै हलसम्मै पुगे । सन्तोषले पिछा गरेको दिदीले थाहा नपाओस् भनेर प्रतिभाले सन्तोष र आफ्नी दिदीको चिना परिचय गराई दिइन् । तै पनि उहाँको नाम सुनेको, अनि बुवासँग चिनजान थियो । प्रतिभा त्यतिबेलाको गाह्रो अवस्थालाई सजिलोसँग सुनाउँछिन् । काठमाडौं कति ठूलो नै थियो र ?
उहाँको काकाको घर र मेरो घर नजिकै थियो, काकाको घर जान्छु भनेर हामी सँगै आउनु भयो । छुट्ने बेलामा त हामीलाई चै नलाने रे ? पत्नीले पुराना घटाना सुनाइरहँदा सन्तोष प्रेमिल हुँदै प्रतिभाका आँखामा हेर्दै थिए । मेरि दिदिले जाउँ न त भन्दिनु भयो । त्यसपछि त परेन आपत । प्रतिभा त्यो बेलाको समयलाई अझ सम्झिन्छिन्, घर त आउनु भो ठिकै थियो चिनजान भयो अझ राम्रो सँग, होटेलमा अडर दिएको जसरी अण्डा बनाउन पो आदेश दिनुहुन्छ । मेरो घरमा आएर मलाई नै हैकम । प्रतिभाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै सन्तोष जोसिलो पारामा बोल्छन् । ससुरालीमा इन्ट्री लिएको नि ।
सन्तोषले प्रतिभाको घरमा त इन्ट्री लिए तर उनको मनमा इन्ट्री लिन अझै बाँकी थियो । बल्लबल्ल प्रतिभा बोल्न मात्र थालेकी थिइन् । प्रतिभाले कहिल्यै सन्तोषलाई आफ्नो जीवन साथीको रुपमा देखेकै थिइनन् । उनलाई सन्तोष मन पर्दैनथ्यो । सन्तोषका पोशाक त झनै मन पर्दैनथ्यो अनि सन्तोषको रवाफिलो स्वभाव पनि मन पर्दैनथ्यो तर सन्तोषलाई भने प्रतिभाको सबै कुरा मन पथ्र्याे ।
शहरमा हुर्किए पनि प्रतिभा र सन्तोष दुवै त्यति शहरिया थिएनन् त्यति बेला सन्तोषलाई सिटी ब्याय बन्न कहिले मन परेन । प्रतिभा आफैँमा लजालु स्वभावकी भएर पनि होला खासै कतै खुल्दन थिइन् । करिब डेड वर्ष सन्तोषले प्रतिभाको पिछा गर्दा पनि प्रतिभाले सन्तोषतिर मन फर्काउन सकिनन् । तर, पनि सन्तोष थकित भएनन् बरु जुक्ति निकाले । सातजना साथीभाइ जम्मा पारेर केही दिनका लागि उनीहरु ट्रेकिङ हिडेँ । सधैँ दिक्क बनाउन आइरहने सन्तोषलाई नदेख्दा प्रतिभाका आँखा चारैतिर घुम्न थाले ।
उनीहरुको प्रेम यतिधेरै मजबुत हुनुको रहस्य सकारात्मक सोचाइ भएको बताउँछिन् प्रतिभा । कलाकारलाई जता पनि पुग्नुपर्छ जोसँग पनि हिँड्नु पर्छ, मैले सकारात्मक सोचे भने समस्या नै आउँदैन । अर्को कुरा एकअर्कामा विश्वास हुनु अति जरुरी छ ।
प्रतिभामा आफ्नो बानी पारेर ट्रेकिङ हिँडेका सन्तोष साथीभाइसँग उता रमाउँदै थिए तर यता प्रतिभाको बेचैनी बढ्न थाल्यो । त्यै बेला दिदीको विवाहका लागि केटा माग्न आउने कुरा चल्यो । चिन्दै नचिनेको मान्छेसँग विवाह गर्नु प्रतिभालाई ठिक लागेन अनि पहिलोपटक उनको मनको आँखामा पूर्ण कदको सन्तोष मुसुुक्क हाँस्न पाए ।
प्रतिभाको कोठाको झ्याल हेर्दै एक साताको भ्रमण पछि भोक र शिथिलता बोकेर सन्तोष आफ्नो घरतिर पाइला बढाउँदै थिए । त्यही बेला प्रतिभाको घरको कौशीबाट आवाज आयो ।
कता पुगेर आउनु भयो नानीहरु ? घुमेर आयौँ सन्तोषले उत्तर दिए ।
आउनुस् थकाइ मारेर जानु होला । पहिलोपटक जबर्जस्ती गरी छिरेका सन्तोषलाई दोस्रोपटक आमाले नै निम्ता दिइन् । भोका साथीभाइलाई टन्न खुवाउँछु भन्दै सन्तोष भर्‍याङ उक्लिए । भान्सा उठाइसकेको हुनाले प्रतिभाको घरमा मितिनी आमाको बाट आएको कोसेली कसार बाँकी थियो । त्यसको सदुपयोगको जुक्ति प्रतिभाले लगाइन् । लक्का जवान ठिटाहरुका अघिल्तिर साह्रोसाह्रो कसार आइपुग्यो । त्यै कसार पनि कस्तो मिठो मानेर खाको प्रतिभा सम्झिन्छिन् । तिम्रो स्पर्शले गर्दा मीठो भाको नि भन्दै सन्तोष जिस्कन्छन् । यसरी सन्तोष दोस्रोपटक प्रतिभाको घरमा प्रवेश गरे । त्यसपछि पारिवारिक चिनजान बढ्न थाल्यो ।
आउनेजाने प्रक्रिया बाक्लिन थालेपछि प्रतिभाकी हजुरआमाले चाला ठिक छैन भनेको प्रतिभा सम्झिन्छिन् । आफ्नो अघिल्तिर नहुँदा सन्तोषलाई खोज्ने प्रतिभाका आँखा, सन्तोष आँखै अगाडि हुँदा भने मुर्मुरिने, चिडिने, रिसाउने, पुरानो बानीमा खासै फेरबदल आएन । जे होस् सन्तोषले प्रतिभाको मनमा इन्ट्री त लिए तर बसाइको ठेगान भने अझै भएको थिएन ।
सन्तोष ट्रेकिङबाट फर्किएपछि उनीहरुको प्रेम अंकुराउन थाल्यो तर प्रतिभाले सर्त राखिन् । सर्त सन्तोषकै हितका लागि थियो । सर्तमा सफासुग्घर हुनु पर्ने, भलाद्मी पोशाक लगाउनु पर्ने, रवाफिलो स्वभाव बदल्नु पर्ने यी कुरामा सन्तोषले मन्जुरी जनाइ हाले । त्यसपछि सन्तोषको दैनिकीमा केही फेरबदल आयो । सन्तोष फिटनेसका लागि बिहान बिहान दौड्ने गर्न थाले । सन्तोष दौडेर घर फर्किँदा प्रतिभा झ्यालमा उभिएर दुवैले मुस्कान साटासाट गर्थे ।
त्यतिबेलाको समाजले उनीहरुको चियोचर्चो गर्न भ्याइ हालेछ । त्यसपछि प्रतिभाको घरमा कुरा पुगी हाल्यो । बिहान बिहान दौडिन थालेका सन्तोषलाई प्रतिभाले जगिंगकै पोशाकमा घर ल्याइन् अनि प्रतिभाका बुवासँग कुराकानी गरेर सन्तोष घर लागे । प्रतिभाका बुवा आमाको पनि प्रेम विवाह भएकाले प्रतिभालाई त्यति असहज भएन तर सन्तोषले घरसल्लाह गर्ने माहोल बनाउन सकेनन् । आफूभन्दा जेठा दाइ दिदीको विवाह बाँकी भएकाले सन्तोषले भन्न सकिरहेका थिएनन् । त्यसपछि उनले भाउजुको सहारा लिए । सन्तोषको परिवार छलफलमा बस्यो । उनका ठूलाबुवाले कलाकार मान्छे, उसले रोजेको भए कुरा गरौँ भनेर सहमति दिएपछि घरमा सहमति भयो । त्यसपछि विवाहको मिति तोकियो, ठूलाबुवाको लाजिम्पाटस्थित घरमा २०३८ साल जेठ २९ गते दुलाही बनेर प्रतिभा भित्रिइन् । त्यति बेला सन्तोष २१ वर्षका थिए भने प्रतिभा १९ वर्षमा भर्खर टेकिकी थिइन् ।
सन्तोष र प्रतिभाको हिमचिम बढेपछि दुवै एकअर्काको परिवारमा छिमेकीको नाताले नजिकिएका थिए । त्यसैले प्रतिभालाई सन्तोषको परिवारमा घुलमिल हुन समस्या भएन तर समस्या सन्तोषलाई थियो । उनी बेरोजगार थिए भने प्रतिभा जागिरे भैसकेकी थिइन् । श्रीमतीको पैसामा रमाउन मनले मानेन र उनी जागिर खोज्न थाले । विवाह गरेको १५ दिनमै उनले राम्रो जागिर हात पारे । त्यसलगत्तै फेरि ट्रेकिङ कम्पनीमा पनि जागिर गर्न थाले । दिउँसो र बेलुका दुई ठाउँमा जागिर गर्न थालेपछि सन्तोषले मज्जाले पैसा कमाउन थाले । विवाहअघि बुवाले लगाएको वचनले सन्तोषलाई जिम्मेवारी बनाउन सिकायो र त्यसकै फलस्वरूप उनले मिहिनेत गर्न थाले । केही समयपछि ट्रेकिङको मात्र जागिर गर्न थालेपछि श्रीमतीलाई पनि घुमाउन पाए अनि उनीहरुको जीवनमा खुसीका लहर आउन थाले ।
विवाह गरेको ४ वर्ष पछि पन्त दम्पतीको पहिलो सन्तानको रुपमा छोरी जन्मिइन् तर दुर्भाग्य उनको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भयो । त्यसपछि उनीहरुका दुई सन्तान भए २०४५ सालमा सकार अनि ०४९ मा कान्छी छोरी प्रतीक (क्याटलिन पन्त)को जन्म भयो ।
विवाहपछि सन्तोषले पढ्न छाड्दिए तर प्रतिभा भने रात्रीकालीन पढ्दै थिइन् । समय म्यानेज गर्न गाह्रो हुन थालेपछि प्रतिभाले पनि आफ्नो पढाइ छाडिन् । समयअनुसार सपना पनि बदलिँदो रहेछ, पहिले पढाइ सपना थियो पछि सन्तोषकै सपना मेरो सपना भयो ।
नाटक, फिल्मको चस्का पसेका सन्तोष ४२ सालमा टेलिभिजन प्रविधि भित्रिएपछि सिरियल बनाउनतिर लागे । त्यसपछि सन्तोषपत्नी प्रतिभाले घर सम्हाल्ने, छोराछोरी स्याहार्नेे गर्न थालिन् । सन्तोषले चौतर्फी तारिफ कमाउँदै गए । सन्तोषको हरेक काममा प्रतिभा दरिलो खम्बा भएर उभिइन् । सन्तोष प्रतिभाप्रति सदैव आफू ऋणी भएको बताउँछन् । प्रतिभा सन्तोषको हात समाउँदै भन्छिन् त्यसैले त म तिम्रो हुँ नि । उनीहरुको प्रेम यतिधेरै मजबुत हुनुको रहस्य सकारात्मक सोचाइ भएको बताउँछिन् प्रतिभा । कलाकारलाई जता पनि पुग्नुपर्छ जोसँग पनि हिँड्नु पर्छ, मैले सकारात्मक सोचे भने समस्या नै आउँदैन । अर्को कुरा एकअर्कामा विश्वास हुनु अति जरुरी छ । पत्नीको कुरामा सन्तोष सहमति जनाउँछन् ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७७ १४:२७ मंगलबार
नागरिक परिवार दाम्पत्य